Maxaa ka jira in 72 sacadood loo qabtay in Soomaaliya uu kaga baxo wakiilka Hay’adda FAO | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in 72 sacadood loo qabtay in Soomaaliya uu kaga...
Maxaa ka jira in 72 sacadood loo qabtay in Soomaaliya uu kaga baxo wakiilka Hay’adda FAO
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Qaramada Midoobay in waddanka Soomaaliya laga saaro wakiilka Hay’adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO Richard Trichard.
Warqad ka soo baxday wasaarrada arimaha dibadda Soomaaliya islamarkaana ku soctay wakiilka QM Soomaaliya iyo hay’adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan QM ee FOA ayaa lagu soo gudbiyay cabashada dowladda Soomaaliya ee la xiriirta Richard Trichard.
Dhinaca kale Af-hayeen u hadlay Qaramada Midobay ayaa Idacadda afka Maraykanka Ku hadasha ee (VOA) u sheegay in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya dawladda iyo madaxda Qaramada Midoobay oo arrintan lagu xallinayo.
Dowladda Soomaaliya oo warqada soo saartay 13kii bisha June ayaa ku ekeyd maanta ilaa haddana ma cadda in Mr Richard Trichard dalka uu ka baxay iyo in kale.
Wasiirka Iskaashiga Caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya Mr Jamaal, ayaa mid ka mid warbaahinta online ka ah ee Soomaalida sidoo kale u xaqiijiyay arintan.
Waxaa lagu waramayaa in loo qabtay in dalka uu kaga baxo mudo 72 sacadood ah.
Arimaha madaxa hay’adda FAO lagu haysto ayaa ka mid ah inuu dowladda ka biyo diiday in xafiiska hay’adda FAO ee Soomaaliya laga soo raro caasimadda dalka Kenya ee Nairobi loona soo wareejiyo caasimadda Soomaaliya ee Moqdisho.
Previous articleImaaraadka Carabta oo la sheegay in $3B ku bixiyay af-gambigii dalka Turkiga
Next articleRuushka oo sheegtay inay dileen hogaamiyaha Daacish